Kutheni iMveliso yeVidiyo ingumba ophambili kunye neendidi ezi-5 zeevidiyo ekufuneka uzivelisile | Martech Zone
U-2015 yayingunyaka wophula irekhodi yemveliso yevidiyo, kunye nevidiyo inyuke ngama-42% ukusuka ngo-2014. Ayilo bali liphela elo, nangona. Iipesenti ezingama-45 zazo zonke iimbono zevidiyo zenzeke kwi isixhobo esiphathwayo. Ngapha koko, kwikota yokugqibela ka-2015, ukubonwa kwevidiyo eshukumayo kukhule amaxesha angama-6 ngokukhawuleza kunokubukwa kwevidiyo yedesktop. Le nenye idatha ebonelelwe kwiNgxelo yeVidiyo yeeBhenkmark zeMveliso yeVenkile ka-2015 inazo zonke izizathu zokuthengisa ezifuna ukuphumeza isicwangciso sevidiyo… kwangoko.
Khuphela iNgxelo yeMveliso yeBenchmarks ye-Invodo ka-2015
Besisoloko sisebenza nabo bonke abathengi bethu ukuqinisekisa ukuba isicwangciso sabo somxholo sibandakanya:
Iividiyo ezichazayo -Ukucacisa ngokupheleleyo imiba entsonkothileyo encediswa ziimveliso okanye iinkonzo zabo, ukubonelela ukuqonda okungcono, ukubekwa endaweni, ukubandakanyeka kunye nokuguqula.
Ukhenketho lweMveliso -Ukuhambahamba kweempawu zemveliso okanye iinkqubo ezinokunceda inkampani yakho.
baqinisekiswa -Akwanelanga ukubeka imveliso okanye inkonzo yakho, kuya kufuneka ube neevidiyo zabaxhasi kunye nabaxumi bokwenyani abavakalisa iziphumo abanokuthi bazifumane.
Ukucinga ubunkokeli -Ukubonelela ngeevidiyo ezinceda abathengi bakho ukuba bafikelele kwimpumelelo kushishino lwabo okanye kwimveliso okanye kwinkonzo yakho kuya kunyusa ixabiso lakho kubo.
Njani-kwiividiyo -Abathengi abaninzi banokuthanda ukunqanda iifowuni kunye nezikrini ukuze bafunde ukwenza izinto. Ukubonelela ngelayibrari yendlela yokwenza iividiyo kunokunceda abathengi bakho basombulule imiba kwaye bandise ukusebenzisa kwabo iimveliso zakho.
Nantsi i-Infodo's Infographic, Imveliso yeVidiyo kunye noQhushumbo lweSelfowuni: Imveliso yeVidiyo yeBenchmark Recap ka-2015.
tags: ungeneleloi vidiyoUkukhula kwevidiyo eshukumayoImveliso yevidiyoImilinganiselo yevidiyo yemvelisoukukhula kwevidiyoividiyo ye-infographicizibalo zevidiyo
Insert.io: Iplatifomu yokuzibandakanya yeKhowudi engenaKhowudi